WOWOW Pot Filler Wall Wall Mount Faucet Matte Black Pot Filler Faucet Rotatable Faucet Brass Kitchen Faucet 2 Tanana azo zakaina indroa mitambatra swing arm arming mihetsiketsika
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Pot Filler Commercial Wall Mount Faucet Matte Black Pasta Arm Faucet
WOWOW Pot Filler Wall Wall Faucet Matte Black Pasta Arm Faucet
Tendrombohitra mpameno vilany: 1/2 NPT mampifandray kofehy (haben'ny fenitra amerikana), rindrina feno lavaka feno rindrina feno vovo, tsy misy afa-tsy amin'ny rano mangatsiaka (tsy afangaro). Ny kitapo fametrahana rehetra dia tafiditra ao anaty fonosana.
Faucet azo ahodina: Ny famolavolana tànana mihodina 360 ° dia manamora ny famenoana mivantana ireo sambo fandrahoana sakafo, tsy mila mandeha avy eo amin'ny filentehana mankany amin'ny fatana. Azonao aforeto amin'ny rindrina io rehefa tsy ampiasaina, amin'izay dia hitahiry ny habaka ao an-dakozia.
Brass Pot Filler Matte Mainty: Vita amin'ny fitaovana varahina avo lenta 100%, anti-harafesina ary tsy harafesina, miantoka faharetana sy fanadiovana mora foana. Miaraka amin'ny faritra anatiny voadio, matanjaka ary tsy misy fivoahana. Matte mainty vita, dian-tànana ary misoroka ny fitrandrahana oksidana.
Neoperl Aerator: Fitaovana aeratoria ABS Neoperl ABS avo lenta, mamorona riandrano aerated tonga lafatra, mangina ary tsy misy fantsona. Inona koa, afaka manampy anao hitsitsy rano!
Warranty, Serivisy ho an'ny mpanjifa: Fiantohana 5 taona sy fanohanan'ny mpanjifa ara-potoana no atolotra. Izy io dia rakotry ny fiverenana voafetra 90 andro. Azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny kaomandinao, hiezaka ny farany vitany izahay hanampy anao.
WOWOW Filler Faucet Folding 2311100RB: fonosana fantsom-pameno vilany, firafitry ny vatan'ny vatan-kazo, fantsom-baravarana an-dakozia misy lamba faran'izay tsara, tsy mahazaka, tsotra hosasana, varahina madio madio, mahery, tsy misy firaka, tsy mahazaka. Fiarovana amin'ny dian-tànana, maharitra, fiarovana ny tontolo iainana & fahasalamana.
Miaraka amin'ny fahatapahan-jorony sy ny indostrian'ny indostriansy, ity mason-trondro ity dia azo inoana fa hanao fanambarana tsara indrindra any an-dakozia. Ny famolavolana rindrina vita amin'ny rindrina any an-dakozia dia manary toerana be dia be ho an'ny asa fiasana, dobolobika roa sosona amin'ity gropy ity ary miloko 360 degre dia manome fahafaham-po hanomezana fahafaham-po ny tady fivoahana raha fatana na kitapom-batana ary avy eo manasa ny rindrina.
Fantsom-panafom-panaka an-dakozia miaraka amina endrika pratical sy fampiasa: Misy valves roa fotsiny ho an'ny mpanara-maso mikoriana roa, ny spout roa miaraka dia manitatra hatramin'ny 20 ″, ary ny faucet vy dia tsy mandeha amin'ny lalana rehefa tsy ampiasaina. Ny famenoana ny haronao saika ilain'ny fahandroana rehetra dia tsy mora kokoa noho ny mampiasa ny mpameno tsimoka. Ny fametrahana rindrina manokana dia mamela toerana fanampiny ao amin'ny kaonteranao raha sady manome tombony miavaka.
Faucet milentika ao an-dakozia misy RATE ROA NY RANO: Ny fantsom-by tokana miaraka amina aeratorika neoperl dia manome tsindry tsy tapaka sy ony rano tsy miova.
INSTALLATION MORA sy WARRANTY 3 taona: Ny haben'ny kiran'ity faucet ity dia 1/2 ″ NPS ary azo ampiarahina amin'ny 1/2 ″ NPS ho 1/2 ″ NPT mpampifandray, ampiasao rano mangatsiaka fotsiny. Tsotra apetraka amin'ny alàlan'ny wrench hexagon. Azafady mifandraisa aminay raha tokony misy fangatahana.
Ny fahazoan-dàlana NSF fanamafisana dia manolotra fampiasa maimaim-poana: Ny cartridge vita amin'ny seramika tsy misy firaka dia eken'ny NSF, manome antoka ny habetsahan'ny firaka amin'ny rano mivezivezy manaraka ny fenitra fiarovana, mampihena ny ratra amin'ny fiarovana mivantana sy fiarovana ireo olon-tianao. Mivadika mora foana ny valves vita amin'ny seramika. Tsy misy volavola hafahafa rehefa mandeha ny rano.
Famolavolana tsy misy fotony Miaraka amin'ny teknolojia farany: Miaraka amina tadin-tsolika roa, ahafahan'ny mpameno tsimoka mivalona miala amin'ny lalana rehefa tsy ampiasaina. Mety hahatratra hatramin'ny 20 maximum farafaharatsiny ary mihemotra rehefa tsy ampiasaina, manome fanamoriana miavaka. Fitaovana varahina nakatona valizy isaky ny tahony, mety kokoa amin'ny fifehezana ny hafainganan'ny rano na famonoana ny rano na ny spout na amin'ny rindrina, asa iray tsotra
Soraty: sakamalaho feno rano mifono kiraro
Famolavolana: napetaka rindrin-trano napetraka tokana
Fitaovana: metaly / vy vy / varahina
Karazana fanamboarana: Nohidiana ny rindrina
Isan'ny fitantanana: tànana roa
Rano mangatsiaka: Rano mangatsiaka fotsiny
Halavan'ny ankapobeny: 20.23 ″
Mampientam-bidy mifangaro Dual Joint Spout
Saribao seramika, azo alaina ary manidy imbetsaka 500,000
Mihodinkodina ny voloko, mety ho 360 ° ny vorona
Inona no ao amin'ny boaty?
Faucet Fotsy aobam-baravarankely indram-panina indroa
Ampahany : 2311100B Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Faucet amin'ny lakozia, fatana, Wall Mount
15 X 9.5 X 2.1 santimetatra
menaka faucet famenoana vilany nanosotra varahina
Pot Filler Faucet Folding Double Double
Aforeto Faucet Filler Fototra